ko htike's prosaic collection: February 2008
Posted by ကိုထိုက် at 16:04 10 comments
Labels: ၂၀၀၈ ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲ, စိတ်ဓါတ်ရေးရာ, မြန်မာ့နိုင်ငံရေး
(Union of Burma)
Statement No. 2008-2
2. Since the root cause of political crisis is “constitution”, the problem should also be solved through constitutional means. As such, Burma needsanew constitution.
3. The Ethnic National Council and other democratic forces have draftedanew constitution of “Federal Republic of the Union of Burma” based on the spirit of “Panglong” and fundamental principles of democracy, equality and justice. A draft constitution also provides guarantees for collective rights of ethnic nationalities, human rights and gender equality, minority rights for all religious and ethnic groups, and the separation of politics and religion.
4. The SPDC announced that they will conductareferendum in order to adoptanew constitution, which has drawn up in accordance with its7Steps Road Map. If the SPDC wants to peacefully implement its Road Map, it needs to consult widely with the ethnic nationalities, democratic forces, and ceasefire and non-ceasefires armed groups. However, the SPDC’s7Steps Road Map and its constitution process are not inclusive nor does it reflect the spirit of national reconciliation. The whole purpose of the SPDC constitution is to legalize the military dictatorship through constitutional means.
5. For the sake of the country and the people, and also for starting national reconciliation and establishing peace, the Ethnic Nationalities Council (ENC) proposes the following points:
(i) thatabroad-based “Constitutional Review Commission” be formed as proposed by Mr. Gambari, UN Secretary-General Special Envoy for Burma, in October 2007, to review two draft constitutions prepared, one by the Federal Constitution Drafting and Coordinating Committee (FCDCC) on behalf of ethnic nationalities and democratic forces, and another one by the State Peace and Development Council (SPDC) at its National Convention.
(ii) that the Constitution Review Commission invites the main stakeholders of the Union of Burma, namely the SPDC, the 1990 election winning party led by Daw Aung San Suu Kyi, and Ethnic Nationalities foratripartite consultation meeting in order to make necessary compromise and give-and-take through negotiation.
(iv) thatatransitional authority be formed by the SPDC, the 1990 election winning party led by Daw Aung San Suu Kyi, and ethnic nationalities based on the resultatripartite negotiation.
6. For the sake of peace and stability not only in Burma but also in the region, we request the international community, especially our neighboring countries, including China, India and ASEAN, to mediateatripartite negotiation among the SPDC, the 1990 election winning party led by Daw Aung San Suu Kyi and ethnic nationalities.
7. If the SPDC rejects our proposal, we will have no choice but to call on the people of Burma to reject the SPDC’s constitution at its referendum in May 2008.
(1) Dr. Lian H. Sakhong, General Secretary (081-02 96 100)
(2) Saw David Taw, Joint General Secretary (081- 3064 351)
Posted by ကိုထိုက် at 16:00 10 comments
Labels: ၂၀၀၈ ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲ, မြန်မာ့နိုင်ငံရေး, ကြေငြာစာ
The Mentalattitudes Needed To Practice Democracy
Posted by ကိုထိုက် at 15:54 8 comments
Posted by ကိုထိုက် at 15:53 8 comments
Posted by ကိုထိုက် at 08:02 8 comments
Posted by ကိုထိုက် at 22:53 10 comments
Democracy is .......
Posted by ကိုထိုက် at 21:03 8 comments
Labels: မြန်မာ့နိုင်ငံရေး, ဝါဒရေးရာ
Why Should we boycott referedum?
Following is my opinion on the referendum that junta will hold in May 2008.
Once we vote in referendum, it means that we agree with junta on their road map whether we vote against the constitution or not.
One step in junta's road map is to hold election.
It means that we agree with junta to hold new election according to their road map.
It means that we agree with junta to ignore 1990 election result.
That's why , by voting in referendum, junta will get advantage to stick to their road map and to ignore 1990 election result even we vote against the constitution.
If junta lose in referendum, I think thy will write constitution again.
That's why we should boycott referendum and concentrate on holding non-violence demonstration participated by the whole country including army,navy,air-force, USDA and power men ("Swan Arr Shin" named by themselves).
Posted by ကိုထိုက် at 21:00 8 comments
Labels: ၂၀၀၈ ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲ, မြန်မာ့နိုင်ငံရေး
Posted by ကိုထိုက် at 10:07 10 comments
မန္တလေးတွင် ထပ်မံ မီးလောင်
မန္တလေး- ပြည်ကြီးမျက်ရှင်အရပ်တွင် မီးစတင် လောင်ကျွမ်းနေပြီး အိမ်ခြေ ဘယ်လောက် ထပ်ပြီး မီးထဲ ပါသွားပြီကိုလည်း မသိရှိရသေးပါ။
ပြည်ကြီးမျက်ရှင်အရပ် (၆၃ x ၆၅ ကြား)၊ (၃၃ x ၃၂ ကြား) ဒေါ်နှင်းနှင်းမော် ကျူရှင် ဘော်ဒါဆောင်ကပ်ရက်အိမ်မှစတင်ပြီး မီးလောင်နေကြောင်းသိရသည်။ မီးသတ်ကားများ အပြေးအလွှားသွား နှိမ်နင်းလျက်ရှိပြီး ဒေါ်နှင်းနှင်းမော် ကျူရှင်(အထူးသဖြင့် ၁၀ တန်း) ဘော်ဒါဆောင်နေ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
အသေးစိပ်အကြောင်းအရာများနှင့် ပုံများကို ညိုကြီးထံတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 05:246comments
ဘုရားရိုက်ခြင်းလား၊ နအဖရဲ့ သက်သေခံ ဖျက်ဆီးခြင်းလား
မြန်မာနိုင်ငံရှိ သံဃာတော်များဦးဆောင်၍ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုများကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာ ကမ္ဘာက အသိဖြစ်သည်။ ထို ငြိမ်ချမ်းစွာ တောင်းဆိုခဲ့သော သံဃာတော်များကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းခဲ့သည်မှာ လူသတ် ရာဇဝတ်ကောင် သန်းရွှေ ဦးဆောင်သော နအဖ အဖွဲ့သာဖြစ်သည်။
ယခုအခါ အဆိုပါ ရာဇဝတ်သမားများကို နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးတွင် တင်ကာ အရေးယူနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင် သက်သေများကို ဖျောက်ဖျက်သည့်အနေဖြင့် ငွေကြာရံ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဝင်ရောက် ဆီးနင်း လုယက်ခဲ့သော ဒမြများကို လက်စတုံး အစီအစဉ်ဖြင့် သက်သေခံများကို ဖျက်ဆီ;နေပြီဖြစ်သည်။
ကဲ ..... နအဖ၏ အမိန်ကို တကယ်နာခံကာ လူမိုက်လုပ်၍ ဘုရားသားတော်များကို မိုက်ရိုင်းခဲ့သော သူများ ယခုအခါတွင် အချင်းချင်း သတ်နေရပြီဖြစ်သည်။ ဆုံဆည်းရာမှ ရယူထားသော သတင်းကို quote ပြန်လုပ်လိုက်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ သက်သေများကို ဖျောက်ဖျက်ပေးသော သူများကလည်း နောင်နေ့တွင် သူတို့သည်လည်း ရာဇဝတ်ကောင် ကြီးများ၏ နောက်ထပ် သက်သေ ဖျက်အစီအစဉ်များတွင် သားကောင်များ ပြန်ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။
"23 Feb ကျောက်ကြီးမြို့ နယ်အရှေ့ ဘက်တစ်နေရာတွင် မှော်ဘီအခြေစိုက် ခမရ ၇၀၁ တပ်ရင်းမှုး ဒုဗိုလ်မှုးကြီး မြင့်ဝေ ဦးစီးသည် စစ်ကြောင်း၁ သည့် ခြုံခိုးတိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် အရာရှိ၃ ဦးကျဆုံးခဲ့ ပြီး ဒဗမ မြင့်ဝေ ကိုယ်တိုင် ဒဏ်ရာထိမှန်ပြီး အရေးပေါ်အနေအထား ရှိနေပြီး ရန်ကုန်စစ်ဆေးရုံးသို့ သည်ဆောင်လာကြောင်းသိရသည်။ ခမရ ၇၀၁ သည် စက်တင်ဘာ ရဟန်းသံဃာများ စီးတန်းလမ်းလျှောက်ရာတွင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီး ၂၇ ရက် မနက်စောစော ငွေကြာရံဘုန်းကြီး ကျောင်းကို ၀င်စီးခဲ့သည် တပ်ရင်းဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ဘုရားရိုက်တာကို ခံနေရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။"
အော် .. တိုင်းပြည် ကာကွယ်ချင်လို့ တပ်ထဲဝင်ပါတယ်၊ ရာဇဝတ်သမားတွေရဲ့ သက်သေများကို ဖျက်ပေးနေရသော သူများဖြစ်နေပြီး၊ ကိုယ့်အလှည့်ဘယ်နေ့ ရောက်မလဲဆိုတာ တွေးကာ ကိုယ့်အရိပ်ကို ရန်သူ ထင်နေရတဲ့ တပ်မတော်သားဘဝတွေပါလား။ ဒါလား ... ယောက်ကျားပီသတဲ့ တပ်မတော်သား ဘဝ။
Posted by ကိုထိုက် at 01:14 10 comments
Labels: စိတ်ဓါတ်ရေးရာ, မြန်မာ့နိုင်ငံရေး, သတင်း
မီးလောင်မှုများ နှင့် စပ်ဆက်၍
မတရားမှုများ ကြီးစိုးနေသော မင်းစိုး မင်းညစ်၊ သာသနာ ဖျက်သော လူများက အုပ်ချုပ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကပ်ဘေးများ စိုက်ရောက်လာနေပြီလား စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာလို့ နေပါပြီ။
၁။ ရေဘေး ဒုက္ခ ...... စက်တင်ဘာ မတိုင်ခင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တခါမှ မကြားဖူး၊ မကြုံဖူးသော ရေ ကြီးမှုများ နိုင်ငံတစ်ခုလုံး အနှံ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
၂။ အငတ်ဘေး ဒုက္ခ ..... လောင်စာဆီဈေးများ မတရားထိုးတက်ခြင်း၊ တိုင်းပြည်၏ အထွေထွေ ဆင်းရဲကျပ်တည်းမှုကြောင့် ပြည်သူလူထု စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေသည်မှာ နိုင်ငံ တစ်ခုလုံး အနှံ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
၃။ မီးဘေး ... တခါမှ မကြုံဘူးအောင် ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီး ၂ ခုမှာ နှစ်ရက်စက်တိုက် မီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။ လောင်နေဆဲပါ။
ဘာကြောင့်ဒါတွေ ဖြစ်နေရတာလဲ ....
သာသနာတော် ပျက်စီးစေခဲ့ခြင်း ...... စက်တင်ဘာ သံဃာသတ်မှု
အစိုးရ ၀န်ထမ်းအားလုံး၏ အကျင့်ပျက်ခြင်း ... နိုင်ငံအနှံ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး လုပ်သူ သန်းရွှေက အစ သူခိုး(အာဏာ သူခိုး၊ စည်းစိမ် သူခိုး) ဖြစ်နေတာကြောင့် အထူးတလည် ပြောစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
ကိုယ့် အလုပ် ကိုယ် မလုပ်ခြင်း ...... မီးသတ်သမားဆိုတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကလည်း မီးသတ်ဖို့ လေ့ကျင့်နေရတာထက် စွမ်းအားရှင် လုပ်ပြီးဘုန်းကြီးနဲ့ လူထုကို သတ်ဖို့ လေ့ကျင့်နေကြရတာကြောင့် တကယ်မီးလောင်တဲ့အခါ မီးမသတ်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေရပါတယ်။
ဒါတွေဟာ အစိုးရလုပ်သူများရဲ့ မှားယွင်းသော အုပ်ချုပ်မှု ရလဒ်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို အမှားမှား အယွင်း ပျက်စီးနေသော အုပ်ချုပ်မှု စနစ်ပုံစံကို ယခု အသက်သွင်းထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ပြည်သူလူထုအား ထောက်ခံခိုင်းရန် ကြံစည်နေတာကတော့ဖြင့် ... ပြည်သူတွေ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ ... ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်းပါ။
Posted by ကိုထိုက် at 11:439comments
Labels: စိတ်ဓါတ်ရေးရာ, မြန်မာ့နိုင်ငံရေး, တွေးမိသော အကြောင်းများ
နအဖ၏ အမျိုးသားညီလာခံမှ ထွက်လာသော အခြေခံ ဥပဒေကို ကန့်ကွက်ရသော အကြောင်းအရင်း .. အပိုင်း(၇)
(တစ်ခါ အလိမ်ခံရလျှင် လိမ်သူ၏ အပြစ်ဖြစ်ပြီး၊ ၂ ခါ အလိမ်ခံရလျှင် အလိမ်ခံရသူ၏ အပြစ်သာဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဆိုသည်မှာ ပြည်သူများ၏ ရပိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ်ပေးသော ဥပဒေ ဖြစ်သည်။ နအဖက ယခု ရေးဆွဲထားသော နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် ပြည်သူများကို ဖိနှိပ်ထားပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်နှင့် စစ်အာဏာရှင်ကို လုပ်ချင်ရာ လုပ်နိုင်အောင် အကာအကွယ် ပေးထားသော အခြေခံဥပဒေ တရပ်သာဖြစ်သဖြင့် ပြည်သူများအားလုံး တခဲနက် ကန့်ကွက်ပါရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။)
( လ ) နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး - -
-၉၂- နိုင်ငံတော်သည် စစ်မှန်သော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေးအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများကို စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် ဥပဒေပြဌာန်း ဆောင်ရွက်မည်ဟု အခြေခံမူချမှတ်ပါတယ်။
အခြေခံမူ (၉၂) အရ လူတိုင်းသည် မိမိ၏အခွင့်အရေး၊ ယုံကြည်ချက်ပေါ်တွင် မူတည်၍ လွတ်လပ်စွာ ပါတီထူထောင်ခွင့်ရှိသည်။ အများအတွက်အကျိုးမပြုသော ပါတီများသည် အစိုးရကိုယ်တိုင်မှ ဖျက်သိမ်းရန်မလိုဘဲ သူ့အလိုကျပျောက်ကွယ် သွားမည်။ ပါတီ များလွန်းလျှင် အလွန်အကျွံ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ခြင်းနှင့် ပါတီနည်းလွန်းလျှင် အာဏာရှင် ဖြစ်သွားနိုင်ခြင်းကို နိူင်ငံတော်မှ ထိန်းညှိပေးရမည်။
( ၀ ) အရေးပေါ်ကာလနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး - -
-၉၃- ( ၁ ) တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ပြည်နယ်တစ်နယ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စုတွင်ဖြစ်စေ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုနိုိင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသည့် အရေးပေါ် အခြေအနေပေါ်ပေါက်လျှင် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ထိုတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စု၌ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာကို သုံးစွဲဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာ၌ လိုအပ်လျှင် ထိုတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေပြု အခွင့်အာဏာများကို နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်များနှင့် အညီ နိုင်ငံတော်သမ္မတက သုံးစွဲဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
-၉၅- ( ၃ ) နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ဆူပူသောင်းကျန်းမှု၊ အကြမ်းဖက်မှု စသော အဓမ္မနည်းဖြင့် ရယူရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းကြောင့် ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲစေမည့်၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပြိုကွဲစေမည့် သို့မဟုတ် အချုပ်အခြာ အာဏာ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးစေမည့် အရေးပေါ်အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လျှင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် နိုင်ငံတော် အာဏာကို နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ရယူသုံးစွဲခွင့်ရှိသည်ဟု အခြေခံမူများ ချမှတ်ပါတယ်။
အခြေခံမူ (၉၃) (၉၄) (၉၅) အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အရေးပေါ်အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လျှင် နိုင်ငံ့အာဏာကို ရယူသုံးစွဲခွင့်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကို တရားဝင် ပြဌာန်းပေးထားခြင်းကြောင် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဆန့်ကျင်နေပါသည်။
တကယ်တမ်း အရေးပေါ် အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင့် ညှိနှိုင်းရမည့် အပြင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အပေါ်တွင် သစ္စာစောင့်သိရပေမည်။ ဗဟိုအစိုးရ အနေဖြင့် ပြည်နယ်များ၏ ကိစ္စရပ်များအပေါ် မလိုအပ်ဘဲ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မပြုလုပ်ရန် ပြဌာန်းပေးရမည်။
( သ ) နိုင်ငံခြားရေးနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး - -
-၉၆- ( ၁ ) နိုင်ငံတော်သည် လွတ်လပ်၍ တက်ကြွပြီး ဘက်မလိုက်သော နိုင်ငံခြားရေးဝါဒကို ကျင့်သုံးသည်။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံအချင်းချင်း မိတ်ဖက်မပျက် ပေါင်းဖက်းဆက်ဆံရေးကို ရှေးရှုသည်။ နိုင်ငံအချင်းချင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေးမူများကို စောင့်ထိန်းသည်။
-၉၇- ( ၂ ) နိုင်ငံတော်သည် မည်သည့်နိုင်ငံကိုမှ စတင်ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြု။
-၉၈- ( ၃ ) နိုင်ငံတော်အတွင်း မည်သည့် နိုင်ငံခြားတပ်ဖွဲ့ကိုမျှ တပ်ချခွင့်မပြုဟု အခြေခံမူများ ချမှတ်ပါတယ်။
အခြေခံမူ (၉၈) အရ မည်သည့် နိုင်ငံခြားတပ်ဖွဲ့ကိုမျှ တပ်ချခွင့်မပြုဟု ဆိုရာ၌ လက်ရှိမြန်မာ့ပင်လယ် ထွက်ပေါက်နှင့် ကိုကိုးကျွန်းများပေါ်ရှိ တရုတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ တပ်စခန်းများကို ဖျက်သိမ်းရမည်။ တရုတ် အားကိုးမှု ကင်းရှင်းစေရမည်။
( ဟ ) ပြစ်မူ ပြစ်ဒဏ်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး
-၉၉- ( ၁ ) မည်သည့် ပြစ်မူဆိုင်ရာ ဥပဒေမျှ နောက်ကြောင်းပြန် အာဏာသက်ရောက်စေရန် ပြဌာန်းခွင့်မရှိ။
-၁၀၀- ( ၂ ) လူ့သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းသေးသိမ်စေသည့် ပြစ်ဒဏ်ပြဌာန်းခွင့်မရှိဟု အခြေခံမူများ ချမှတ်ပါတယ်။
( ဠ ) သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး
-၁၀၁- နိုင်ငံတော်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မည်ဟု အခြေခံမူ ချမှတ်ပါတယ်။
အခြေခံမူ (၁၀၁) အရ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရမည့်အပြင် သစ်တောသယံဇာတများကို ထုတ်ယူရာတွင် အကန့်အသတ်ဖြင့်ထုတ်ယူရမည်။ လက်တွေ့အားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စစ်တိုင်းမှုးများနှင့် အပေါင်းအသင်းစီးပွားရေးသမားများ စည်းကမ်းမဲ့ ထုတ်လုပ်နေသောကြောင့် ပြုန်းတီးနေပြီဖြစ်သော မြန်မာ့သစ်တောများကို တတ်ကျွမ်းသော ပညာရှင်များအား အချိန်မှီ ခေါ်ယူ၍ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည်။
( အ ) အထွေထွေပြဌာန်း ချက်များနှင့် စပ်လျဥ်းပြီး
-၁၀၂- ( ၁ ) မြန်မာစာသည် ရုံးသုံးစာဖြစ်သည်။
ဗမာစာသည် နိုင်ငံတော်၏ ရုံးသုံးစာဖြစ်သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးစုများ၏ စာကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးစုများ သင်ကြားခွင့်ရှိအောင် ပြဌာန်းပေးရမည်။
-၁၀၃- ( ၂ ) နိုင်ငံတော် အခြေခံမူများသည် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များက ဥပဒေပြဌာန်းရာတွင်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် အခြားဥပဒေများပါ ပြဌာန်းချက်များကို အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင်လည်းကောင်း လိုက်နာရမည့် လမ်းညွန်များဖြစ်သည်။
-၁၀၄- ( ၃ ) နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်များက ပြဌာန်းသည့် ဥပဒေများသည်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းဒေသကြီးများ၊ ပြည်နယ်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်ချုပ်အုပ်ခွင့်ရစီရင်စုများ၏ အုပ်ချုပ်မူဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ညီညွတ်မူ ရှိ၊ မရှိ စီစစ်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုနှင့်တိုင်းဒေသကြီးအကြား၊ ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ်အကြား၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အကြား၊ တိုင်းဒေသကြီးအချင်းချင်း၊ ပြည်နယ်အချင်းချင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စုအကြား၊ ကိုယ်ပိုင်ချုပ်မူရ စီရင်စု အချင်းချင်း ဖြစ်ပေါ်သည့် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမူများကို ကြားနားဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကအပ်နှင်းသည့် အခြားတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး တစ်ရုံးကို ဖွဲ့စည်းမည်ဟု အခြေခံမူများ ချမှတ်ပါတယ်။
( က ) သမိုင်းဝင် ပင်လုံစာချုပ်ကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောကြောင့်သာ ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုပင်လုံစာချုပ်၏ အနှစ်သာရမှာ ( ၁ ) တန်းတူ၊ ( ၂ ) ပြဌာန်း၊ ( ၃ ) ခွဲထွက် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
( ၁ ) တန်းတူး။ ။အမျိုးသားနိုင်ငံရေး တန်းတူညီမျှမူရှိရေး(ဗမာတစ်ကျပ် - ရှမ်းတစ်ကျပ်)
( ၂ ) ပြဌာန်း။ ။ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရှိရေး၊
( ၃ ) ခွဲထွက်။ ။ခွဲထွက်လိုက ခွဲထွက်ခွင့်ပြုရန် - - - ဖြစ်သည်။
( ခ ) ညောင်နှစ်ပင် အမျိုးသားညီလာခံတွင် အခြေခံ ဥပဒေရေးဆွဲရေးအတွက် ချမှတ်ထားသော ဦးတည်ချက် (၆) ရပ်သည် လမ်းလွဲသို့ ဦးတည်နေပါသည်။ ပြည်သူလူထုသည် သမိုင်းတောင်းဆိုချက်အရ အလိုရှိနေသည်မှာ ( ၁ ) ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီနှင့် ( ၂ ) စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု စနစ်ဖြစ်သည်။ ချမှတ်ထားသော ဦးတည်ချက်နှင့် အခြေခံမူ ( ၁၀၄ ) တို့သည် - - -
( ၁ ) တပ်မတော်က အာဏာကို ချုပ်ကိုင်ထားမည့် အချုပ်အချယ်ခံ ဒီမိုကရေစီဖြစ်သည်။
( ၂ ) ပြည်ထောင်စုမဟုတ်ဘဲ တစ်ပြည်ထောင် စနစ်( သို့ ) တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်သာ ဖြစ်သည်။
ဤသည်ကား စစ်အာဏာရှင် မဟာဗမာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်၍ ပြည်သူအားလုံး တပြေးညီနစ်နာမည်။ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအဖို့ ခေါင်းမဖေါ်နိုင်သည့် ဘ၀မျိုးကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။
( ဂ ) ညီလာခံ ဖွဲ့စည်းထားပုံသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ တကယ်ဖြစ်သင့်သည်မှာ ပြည်သူလူထု ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသောကိုယ်စားလှယ်များကို အမာခံထားပြီး အခြားကိုယ်စားလှယ်များကို အရံထား၍ ဖွဲ့စည်းရမည်။ ယခု ဖွဲ့စည်းထားသည်မှာ ဖြစ်သင့်သည်နှင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နိုင်ငံမျိုးတွင်မှ မရှိသောဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမျိုး ဖြစ်သည်။
( ဃ ) ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှစ၍ ယနေ့အချိန်အထိ နှစ်ပေါင်း ( ၄၀ ) ကျော်ကြာ အာဏာရှင် စစ်အစိုးရသည် လက်တွေ့အားဖြင့် အာဏာယူထားသော အစိုးရ (De Facto Government) အဆင့်သာရှိရာ လက်ရှိ တစ်ဖက်စောင်းနင်းရေးဆွဲနေသော အခြေခံမူ အတည်ဖြစ်သွားပါက နောင်နှစ်ပေါင်း (၄၀၀) အထိ တရားဝင် အစိုးရ (De jure Government)အဖြစ် ဆက်လက် အာဏာ တည်မြဲသွားမည်ကို တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုကြီး ရှင်းလင်းစွာ သိမြင်ဖို့ အရေးကြီးပါသည်။ ယခုအချိန်အခါသည် တိုင်းပြည်ချောက်ထဲသို့ ကျရန် လက်နှစ်လုံးသာလိုပါတော့သည်။ ထိုကြောင့် ချောက်ထဲမကျအောင် အချိန်မီ ကာကွယ်ရပေမည်။ ချောက်ထဲသို့ ကျသွားပြီးလျှင် ပြန်တတ်ဖို့ မလွယ်ကူကြောင်း နိုင်ငံရေး သတိရှိဖို့လိုမည်။
( င ) ပြည်သူလူထု အနေဖြင့် အမျိုးသားညီလာခံတွင် ချည်ပြီးတုတ်ပြီး ဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင် နောက်ဆုံး ရုန်းကန်ထွက်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိပါသေးသည်။ ဤသည်မှာ `လူထု ဆန္ဒခံယူပွဲ´ ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံဥပဒေကို အာဏာပိုင်များက အပိုင်စီးထားရေးအတွက် ကြံဖွတ်လူတစ်စုကို အသုံးပြု၍ ဘောလုံးကွင်း ဒီမိုကရေစီနည်းဖြင့် အတည်ပြုရန်ကြိုးပမ်းကြပေလိမ့်ဦးမည်။ ထိုအစည်းအဝေးပွဲများကို တတ်ရောက်ခြင်း မပြုမိအောင် ရှောင်ကျဉ်ခြင်းဖြင့် ရန်သူအားပေး မလုပ်မိကြစေရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထိုသို့ ဘောလုံးကွင်း ဒီမိုကရေစီမျိုးကိုလည်း ကမ္ဘာကလက်ခံမည် မဟုတ်ပေ။ သို့ဖြစ်ရာ လူထု ဆန္ဒ ခံယူပွဲကို မလွှဲမသွေ လုပ်ရပေမည်။ ပြည်သူလူထုက ထို အခွင့်အရေးကို လက်မလွတ်တမ်း အသုံးချနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ယခုကပင်ကြိုတင်၍ အသင့်ပြင်ထားကြရလိမ့်မည်။
( စ ) လွတ်လပ်ရေး သက်တမ်းနှစ် ( ၆၀ ) တိုင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း ဗမာ အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား အပေါင်းတို့သည် နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ် ကျွန်ဘ၀မှ ပခုံးပြောင်းကာ စစ်တပ်၏ ကျွန်ဘ၀အောက် ရောက်ခဲ့ရပါသည်။ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့ ကံကြမ္မာကို မိမိသာလျှင် ဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက် တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းသော်လည်းကောင်း၊ အစုအဖွဲ့လိုက်သော်လည်းကောင်း၊ လူမျိုး အသီးသီးအလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ တောင်တန်းမြေပြန့် မခွဲခြားဘဲ စုပေါင်းလက်တွဲခြင်းဖြင့် လာမည့်လူထု ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်မဲပေးနိုင်ခြင်းသည် မိမိအခွင့်အရေးအတွက်သာမက နောင်မျိုးဆက်အတွက်ပါ ကာကွယ်သမှုပြုရာရောက်သည်။
( ဆ ) ညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံသည် ဗမာအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားအားလုံး၏ ကံကြမ္မာကို ဖန်တီး၍ ချောက်ထဲသို့ တွန်းချနေခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ မကြာမီကျင်းပတော့မည့် လူထု ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် တစ်ခဲနက် ကန့်ကွက်မဲများ ထည့်ပေးရန်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း တပ်လှန့်နိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
(P.S မှတ်ချက်။ ။ယခု ရေးသားထားသော အချက်များသည် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ကျော်ဆန်းကိုယ်တိုင် ဦးစီးထုတ်ဝေသော အခြေခံမှု ၁၀၄ ချက်အပေါ် ဦးအောင်တိုး ရှင်းပြသည့် စာအုပ်ပါ အချက်များကို ပြန်လှန်ဝေဖန်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အနက်ဖြင့်ရေးထားသော စာများသည် ကျော်ဆန်း ဦးစီးသော စာအုပ်ပါ စာများ ဖြစ်၍ အနီဖြင့်ရေးထားသော စာများသည် ဝေဖန်ထားသော စာများ ဖြစ်ပါသည်။)
Posted by ကိုထိုက် at 00:45 8 comments
Posted by ကိုထိုက် at 07:57 11 comments
လူသိများ ကျော်ကြားတဲ့ ဥပမာလေး တစ်ခုပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားဖူး မှတ်ယူထားတဲ့ ပုံပြင်လေး တစ်ခုပါ။
“ဖား တစ်ကောင်ကို၊ ပူနေတဲ့ ရေနွေးအိုးထဲ ထည့်လိုက်ရင် အဲဒီ ဖားဟာ ခုန်ထွက်လာမယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဖားကို ရေအေးထဲထည့် ပြီးရင် အောက်က မီးမြှိုက်လိုက်ရင် အဲဒီဖားဟာ သေတဲ့အထိ ရေပူထဲမှာ နေသွားတယ်။”
အခု နအဖက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတရပ်လုံးကို ရေအေးထဲထည့်ပြီး အောက်က မီးမြှိုက်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ အခုကတည်းက ခုန်ထွက်ရမယ်ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။ ငါကတော့ မပူသေးလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်က မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ ပြန်အေးသွားမလားဆိုပြီး စောင့်ကြည့်ဦးမယ်ဆိုရင်လည်း မကြာခင် သေမှာပါပဲ။ ဒီတော့ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ။
အောက်က သတင်းက ပါတဲ့ အချက်တွေ မှားတယ်လို့ ဘယ်သူ ငြင်းနိုင်ပါသလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံက လူတိုင်း အဲဒီလို မိန်းကလေးတွေ မလုပ်ချင်ပဲ ခပ်ပေါပေါနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရောင်းစားပြီး ဝမ်းစာရှာနေရတာ အားလုံး သိပါတယ်။ ... အဲဒါဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ နအဖ ပေါက်တက်ရ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့် အမျိုးကောင်း သမီးတွေ ဘဝ ပျက်နေရတာပါ။ အဲဒါ ငါနဲ့ မဆိုင်ဘူး၊ ငါ့ မပူသေးလို့ ခုန်မထွက်သေးဘူး၊ ရသလောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ နောက် အလှည့်ဟာ ခင်ဗျား အလှည့် ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အဆိုပါ မိန်းကလေးထဲက မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ညီမ၊ ခင်ဗျား ညီမ ဖြစ်နေမယ်ဆို ဘယ်လို ခံစားရမလဲ။
ငါတို့က ချမ်းသာတာပဲ ငါ့ မိသားစု မဖြစ်လာဘူး မထင်ပါနဲ့။ နအဖ လက်ထဲမှာ ဘယ်သူမှ မမြဲပါဘူး။ ဥပဒေ မရှိတဲ့ နအဖ လက်ထဲမှာ ခင်ဗျား ချမ်းသာမှုဟာ နောက်နေ့မှာ သူတို့ ပစ္စည်း အဖြစ် အချိန်မရွေး ဒမြတိုက်ယူသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
အခု ငါတို့ဟာ ရေအေးထဲ ထည့်ပြီး အောက်က မီးမြှိုက်ခံနေရပြီဆိုတာ သိပါ။ သတိရှိပါ။ ဒါကြောင့် တည်ငြိမ် စိတ်ချရတဲ့ စနစ်၊ တရားဥပဒေဆိုတာတွေ ရှိလာအောင် နအဖ အာဏာရှင် စနစ်ကို ချေမှုန်းတဲ့ နေရာမှာ ပြည်သူတရပ်လုံး အသိ၊ သတိ ရှိရှိနဲ့ ပါဝင်ကြပါလို့ ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ပြိုင်တူတွန်းလျှင်ရွေ့နိုင်ပါသည်။ Unity To Victory
As Myanmar's economy crumbles, prostitution lures young women
YANGON (AFP) - Cherry and Kay Kay walk into room Number Two ofaYangon karaoke bar, whereaman waits alone for them onabrown leather sofa.
"Come on, girls. Sing, please," he says, as they flick the karaoke machine toaMyanmar folk song they hope he likes.
The scene may not be uncommon in many parts of Asia, but was until recently rare here in isolated Myanmar, where economic desperation is increasingly pushing young women intoasex trade that hides behind the facade of karaoke bars and massage parlours.
At the bars, known locally as KTVs for "karaoke television," young women in their late teens and early 20s entertain clients in private air-conditioned rooms furnished with sofas and karaoke equipment.
Waiters enter only when customers order food and drinks, or if the women ringabell to alert the management thataclient is getting out of hand.
Workers at KTVs say sex is not necessarily on offer, but they add that in the private rooms boundaries can be vague.
"It's hard to control men in this kind of room," 22-year-old Kay Kay says.
"They are so wild when they get drunk. I need to hold both his hands to protect myself. Sometimes I need to ring the bell to call for help from the waiters," she says.
Customers vary from teenagers to adults. Sometimes they come with friends, occasionally even with family, to venues that blur the line between casual entertainment and brothels.
Cherry and Kay Kay are among 20 girls working in their KTV bar, located near Yangon's landmark Shwedagon Pagoda, one of the Buddhist country's holiest shrines. Ostensibly they are hostesses, paid to keep customers company, encourage them to buy drinks, and to sing for them.
Prostitution is illegal in Myanmar, but it began to take root underground after the ruling junta abandoned socialism foramarket economy in 1996.
Myanmar is one of the world's poorest countries, where even urban professionals scrape outaliving on less thanadollaraday. Salaries for civil servants, for example, start at about 20,000 kyats (16 dollars).
Many industries have been decimated by decades of economic mismanagement by the military, coupled with the effects of Western sanctions imposed over the regime's failure to make good on promises of democratic reforms.
Cherry says she decided to work in the karaoke bar after quitting her low-wage job atagarment factory.
The eldest daughter in her family, Cherry was taken out of school before she reached her teens so her family could afford to send her brothers to school.
She then started working in the factory, but quit after discovering that she could earn more in tips in one night at the karaoke bar than she earned inamonth at her old job.
Cherry and Kay Kay say they both grew up in broken families, and have not told any of their relatives about their new jobs.
"I didn't tell my mum that I'm working at KTV. She thinks that I'm working asasales girl inasupermarket," Cherry says.
-- 'Our girls even include university graduates' --
Many of the girls working in Yangon's KTV bars have come from Myanmar's impoverished countryside in search of better opportunities in the city.
The bar that employs Cherry and Kay Kay provides them with free room and board, andabase salary of 20,000 kyats, or about 18 dollars.
"The basic salary is similar to what I earned at the factory, but here we get tips from customers," Cherry says. "Sometimes we earn 30,000 kyats (25 dollars) in one night just from the tips."
The women are not allowed to leave the bar before its 2:00 am closing time, and then they are driven back to the hostel.
Inanation that prides itself on the glories of its past and its literary culture, the growth of the entertainment industry has caused some public soul-searching.
One poet, who wrote about the trend inapoem called "Yangon Nights," said poverty was not the only culprit driving young women to their after-hours jobs.
"As many of them are uneducated and don't value their life, so they eventually end up in this community," he told AFP, speaking on condition of anonymity.
But Wine, who worked asacashier inamusic restaurant, said that even some professional women are turning to the nightlife for second jobs to help make ends meet.
"The girls working in our shop include schoolgirls, nurses who are available to work at night and university graduates," Wine said, adding that she started working at the restaurant after twice failing her high school graduation exam and being unable to find any other job.
"Many friends of mine work in KTVs or music pubs while also taking university correspondence courses," she said.
The stigma attached to the bar girls remains strong, and many parents would rather see their children join the millions of Myanmar migrants heading overseas to search for work.
"My youngest daughter wanted to work inaKTV bar. I did not allow her, because once she takes the step of working there, it becomes very easy for her to becomeacommercial sex worker. It's very hard to control," said Ei,a59-year-old mother of two daughters.
Ei says that like many families here, hers is struggling to survive. But she would rather see her daughters try to find work overseas than let them work inakaraoke bar.
Cherry and Kay Kay say they are happy they make enough money to support their families without having to leave the country.
"I can support my family well. One of my brothers will graduate from university very soon," says Cherry.
"I don't need to work very hard like I did in the factory but you know customers treat us just as bar girls, they look down on us. The reputation ofabar girl is not so good in this community."
Posted by ကိုထိုက် at 01:33 15 comments
နအဖ၏ အမျိုးသားညီလာခံမှ ထွက်လာသော အခြေခံ ဥပဒေကို ကန့်ကွက်ရသော အကြောင်းအရင်း .. အပိုင်း(၆)
(တစ်ခါ အလိမ်ခံရလျှင် လိမ်သူ၏ အပြစ်ဖြစ်ပြီး၊ နှစ်ခါ အလိမ်ခံရလျှင် အလိမ်ခံရသူ၏ အပြစ်သာဖြစ်သည်။
ယခု နအဖက အခြေခံ ဥပဒေအတွက် ဆန္ဒခံယူပွဲ ပြုလုပ်မည်ဟု ပြောသည်။ ယခု လက်ရှိ အခြေခံမူ ၁၀၄ ချက်တွင် အဓိက ကျသော အခန်းကဏ္ဍအပိုင်းမှာ ထောက်ခံနိုင်စရာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ အချက်တစ်ချက်ရှိလျှင် ထောက်ပြပါ။ ထောက်ခံစရာ ကောင်းချက် မရှိဘဲ လုံးဝ မထောက်ခံနိုင်ပါ။)
( မ ) စီးပွားရေးနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး - -
-၈၀- ( ၁ ) နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးစနစ်သည် ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ် ဖြစ်သည်။
အခြေခံမူ (၈၀) အရ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဆိုရာ၌ အာမခံချက်ရှိသော ဈေးကွက်စနစ်ကို ပြဌာန်းပေးနိုင်ရမည်။ သစ်သားပြားပေါ်တွင် ဆေးသုတ်ပြီး `တပ်ပိုင်မြေ´ ဟုရေးသားကာ ပြည်သူ့အိုးအိမ်၊ ခြံ မြေ ၊ လယ်ယာမြေများပေါ်တွင် စိုက်ထူ၍ ပြန်လည်ရောင်းစားသော `ခေတ်သစ်စစ်တပ် စီးပွားရေးစနစ်´ ကိုကာကွယ်ပြဌာန်း ပေးနိုင်ရမည်။
-၈၁- ( ၂ ) နိုင်ငံတော်သည် အမျိုးသား စီးပွားရေး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံတော် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ သမ၀ါယမအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကစသည့် စီးပွားရေးအင်အားစုအားလုံးကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည်။
-၈၂- ( ၃ ) နိုင်ငံတော်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် တရားသဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကို ပျက်ပြားစေရန် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကဖြစ်စေ၊ အစုအဖွဲ့ကဖြစ်စေ လက်ဝါးကြီးအုပ်ဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် ဈေးကစားပြုခြင်းဖြင့် အများပြည်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းမှ တားဆီးကာကွယ်မည်။
အခြေခံမူ (၈၂) အရ အပြောထက်အလုပ်ကသာ ပဓါနကျပါတယ်။ လက်တွေ့အားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ပိုင်ဆိုင်သော မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမီတက်သည် တိုင်းပြည် စီးပွားရေးအားလုံးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားသောကြောင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်နစ်နာစေသည့်အပြင် အာဏာပိုင်လူတချို့ နှင့် ကိုယ်ကျိုးရှာ စီးပွားရေးသမားများသာ ခံစားနေရသောကြောင့် သင်ခန်းစာယူ၍ ကာကွယ်တားဆီးရမည်။
-၈၃- ( ၄ ) နိုင်ငံတော်သည် အများပြည်သူတို့၏ နေထိုင်မှု အဆင့်အတန်းမြှင့်ရေးနှင့် အထွေထွေအရင်းအနှီးများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ကို ရှေးရူဆောင်ရွက်မည်။
-၈၄- ( ၅ ) နိုင်ငံတော်သည် အမျိုးသားစီးပွားရေး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် နည်းပညာ၊ အရင်းအနှီး၊ စက်ပစ္စည်း၊ ကုန်ကြမ်း အစရှိသည်တို့ကို ရရှိစေရန်ကူညီမည်။
-၈၅- ( ၆ ) နိုင်ငံတော်သည် စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံပိုင် သိမ်းယူခြင်းမပြု။
-၈၆- ( ၇ ) နိုင်ငံတော်သည် တရားဝင်ထုတ်ဝေထားသော ငွေကြေးကို တရားမ၀င်ငွေကြေးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း မပြုဟု အခြေခံမူများ ချမှတ်ပါတယ်။
အခြေခံမူ (၈၆) အရ တရားမ၀င်ငွေကြေးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းမပြုဟု ဆိုသည့်အစား အာမခံချက်ရှိအောင် ရွှေစဘော်တင်၍ ထုတ်လုပ်သော ငွေကြေးသာဖြစ်ရမည်။ သို့မှသာ ငွေကြေးတန်ဖိုးသည် တည်ငြိမ်ပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိမည်။
( ယ ) မြေ၊ ရေ၊ လေ သယံဇာတပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး - -
-၈၇- ( ၁ ) နိုင်ငံတော်သည် နိုင်ငံတော်ရှိမြေအားလုံး၊ မြေပေါ်မြေအောက်၊ ရေပေါ်ရေအောက်၊ လေထုအတွင်းရှိ သယံဇာတ ပစ္စည်းအားလုံး၏ ပင်ရင်းပိုင်ရှင် ဖြစ်သည်။
-၈၈- ( ၂ ) နိုင်ငံတော်သည် နိုင်ငံပိုင် သယံဇာတပစ္စည်းများအား စီးပွားရေးအင်အားစုများက ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းကို ကွပ်ကဲကြီးကြပ်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် ဥပဒေပြဌာန်းမည်။
-၈၉- ( ၃ ) နိုင်ငံတော်သည် နိုင်ငံသားများ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ အမွေဆက်ခံခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ တီထွင်ခွင့်နှင့် မူပိုင်ခွင့်တို့ကို ဥပဒေပြဌာန်းချက်နှင့် အညီခွင့်ပြုမည်ဟု အခြေခံမူများ ချမှတ်ပါတယ်။
အခြေခံမူ (၈၇- ၈၈- ၈၉) အရ သယံဇာတ အားလုံး၏ ပိုင်ရှင်မှာ မြေကြီးသာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု ဆိုသည်မှာ ပြည်နယ်များကို စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ယင်းသယံဇာတ ပစ္စည်းများကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့ စုပေါင်းပိုင်ဆိုင်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသယံဇာတပစ္စည်းများကို ထုတ်ယူသုံးစွဲပါက မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်သော ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များကို အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိစေရန် ဥပဒေတွင် အတည့်အလင်းပြဌာန်း ပေးထားရမည်။
သယံဇာတ ဆိုသည်မှာ မိမိမျိုးဆက် တစ်ခုတည်းအတွက်သာမဟုတ်ဘဲ နောင်သားစဉ်မျိုးဆက်များ အတွက်ပါဖြစ်သောကြောင့် ထုတ်ယူသုံးစွဲရာတွင် အကန့်အသတ်ဖြင့် ထုတ်ယူသုံးစွဲရမည်။
( ရ ) ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး - -
-၉၀- ( ၁ ) နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဥပဒေနှင့်အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်နှင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့် ရှိရမည်။
-၉၁- ( ၂ ) ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ကို သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒရှင်များက နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ပြဌာန်းထားချက်များနှင့်အညီ တာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့်ရှိသည်ဟု အခြေခံမူများချမှတ်ပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 23:379comments
ပြည်တွင်းကမြန်မာများရော ပြည်ပက မြန်မာများရောယခုဆိုလျှင် အကြိတ်အနယ်၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန်၊ စိတ်ဝင်တစား၊ တင်ပြဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေတဲ့ ငြင်းခုံနေကြသော ကိစ္စကြီးကတော့ လက်နက်ကိုင်ပြီး အာဏာကို မတရားသိမ်းပိုက်ကာ ကမ္ဘာအလယ်တွင် သောက်ရှက်မရှိသော မျက်နှာနှင့်ပြောင်ပြောင် လုပ်ချင်ရာလုပ်နေသော အစိုးရဟု လူသိများသော၊ ကမ္ဘာသိသော နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီအစိုးထုတ်ပြန် ကြေညာသော ၁/၂၀၀၈ မေလ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကိစ္စဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြင်တာတော်တော်များများနှင့် သိတာ၊ ကြားတာတော်များများကတော့ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ တော်တော်များများက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ရဲ့ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောဆိုမှုကိုလည်း ကြည့်နေသလို၊ ပြင်ဆင်သင့်သည်များကို ပြင်ဆင်ဖို့ လိုက်လံဆွေးနွေးနေရတုံးပါ။
ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်မြင်သော အမြင်ကိုသာ တင်ပြပါသည်၊ ဖြစ်သင့်သည်၊ ဖြစ်ထိုက်သည်ဟု ထင်မိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၊ ဘာကို ဖြစ်သင့်သည်၊ ဘာကိုဖြစ်ထိုက်သည် ဆိုတာကတော့၊
သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီး အမှန်နှင့် သတ္တိရှိခြင်းကို ရဲရဲဝံ၀ံ လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်းကို ထပ်လောင်းပြောပါရစေ။ တော်တော်များများ အခုဆွေးနွေးနေသော လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို ခဏလေးထားပြီး၊ အရင်ဆုံး ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြီးကို မည်သို့ မည်ပုံရှင်းပါမည်လည်းဆိုတာကိုပြောတာပါ။
သတင်းစာလေးထဲတွင် ထည့်ယုံနှင့်၊ လမ်းဘေးစကားပြောယုံနှင့်၊ ဒါတွေက နှစ်၂၀ ကြာပြီဆိုသောအကြောင်း ပြောယုံနှင့်၊ ထိုသို့ သောအရေးမပါသော အကြောင်းတွေနှင့် လွယ်လွယ်ကူကူ န၀တကလည်း လုပ်ဆောင်လို့ မရသလို၊ ဖျက်လို့လည်းမရပါ ပြည်သူကလည်းဝိုင်းပြီး န၀တ ဘာလုပ်လုပ် နောက်ဆုံး လိုက်ပေးရသော ပုံစံနှင့်လည်း အခင်းအကျင်းကို အားလုံးရဲ့ တနေ့ တခြား ပိုမိုပြင်းထန်စွာ ခံစားရခြင်းတွေကို ချိုးဖျက်ချင်တာ ကုလားကြီးလည်း ယောက်ကျားပါဘဲဆိုပြီး မလုပ်သင့်ပါ။
သမိုင်းရဲ့ သားကောင်ဘ၀ကိုဘဲရောက်ရောက်၊ မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမှု၊ ဖြစ်စေကာမှု ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ဖြစ်ကိုဖြစ်ထိုက်ခြင်းကို တရားခြင်း၊ မျှတခြင်း၊ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝခြင်း၊ အမှန်ဖြစ်ခြင်းတို့ကိုတော့ လူသားဆိုသော ဖြစ်စဉ် အရသေဆုံးခြင်းဆိုတာကို ရှိပေမယ့် ထို ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ကို ဖြစ်ထိုက်ခြင်းကို တရားခြင်း၊ မျှတခြင်း၊ အဓိပါယ်ပြည့်ဝခြင်း၊ အမှန်ဖြစ်ခြင်းကိုတော့ သေသေချာချာရှင်သန်ခွင့်ကိုတော့ မြန်မာပြည်မှာရှိနေဖို့ တိုင်းရင်းသား၊ ပြည်သူအပေါင်းမှာ အပြည့်အ၀တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဘဲမြင်ပါတယ်။
သော၊ကလိန်ကျခြင်းများစွာနှင့်စံနစ်တကျလက်တလုံးခြား လိမ်လှည်၊လှည့်ဖျားကာ၊ကို ၁၉၆၂ ကစပြီးသေသေချာချာ ကျင့်သုံးနေခဲ့တာကအခုထိပါဘဲ။
ဒါကို လိမ်မှန်းသိပေမဲ့လည်း၊ ငါနှင့်ငါ့ မိသားစုဆိုသော၊ ငါအသိုင်းဝိုင်းဟူသော၊ မာန်တွေနှင့်၎င်း၊ ငါလူမျိုးမှဆိုသော အတွေးတွေနှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုပျော်မွေ့ခြင်းရယ်၊ မသိခြင်ယောင်ဆောင်ပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြသော လူတန်းစားရယ်၊ မည်သို့မှ၊ ဘာမှနားမလည်သော လူတန်းစားတွေကို သေသေချာချာမွေးယူသလို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သော မဟာဥဏ်ကြီး အလိမ်ထိပ်ခေါင်ကို ယခုအပြီးပြတ် ရှင်းမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရော နအဖ(နဝတ) အစိုးရဟာ အာဏာမလွှဲဘဲ အချိန်သာဆွဲပြီး ၁/၁၉၉၀ ကို ကြေညာပြီး အမျိုးသားညီလာခံကိုဖေါ်ဆောင်ကာ အချိန်ဆွဲရေးကို စတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။
ဒါလည်းအားလုံးသိထားပြီးသားပါ။ ပြီးတော့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ညစ်ပတ်စွာ၊ အာဏာဟူသောစကားလုံးကြီးကို လက်နက်နှင့်ပူးတွဲကိုင်တွယ်ကာ မကြာ၊ ကြာအောင်ကို လုပ်ရင်း ၁၉၉၀ ရွေးကောက် ပွဲကို ဘာသိဘာသာ အသံတိတ်ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်လာတာကိုလည်း သိသိကြီးနဲ့ အမျိုးသားညီလာခံကို ဝိုင်းသိုင်းကြဖို့ ပြည်သူဘက်ကနေ အသံကို လိုကြောင်းပြောကြ၊ ငြင်းကြ၊ ခိုင်းနှိုင်းကြနဲ့ ဝေဝေဆာဆာပါဘဲ။ နောက်ထပ် တစ်ခုဖြစ်လာပါသော နဝတရဲ ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် နောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲအသစ် လုပ်ကြရအောင်ဆိုပြီး (ရို့ဒ်မက်ပ်) လမ်းစဉ်ခုနှစ်ချက်ကို ကြေညာတော့လည်း ပြည်သူကို သိုင်းဝိုင်းဖို့ ပြောနေကြပြန်ပါပြီ။
မေးပါရစေ၊ ကျွန်တော်တို့မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးဆောင်ခေါ်နိုင်သော လိုင်းမရှိဘူးလား။ ၁၉၉၀ ပြည်လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဘာလို့ ချောင်ထိုးထားလိုက်သော၊ လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်နေကြတာလည်း၊ ၁၉၉၀ ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် တင်မြှောက်ခံရသော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေမှာ၊ န၀တရဲ့ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ လက်တလုံးခြားဖိနှိပ်၊ နှိပ်ကွတ်ခြင်းကိုခံနေပေးခဲ့ရခြင်း၊ သူတို့ရဲ့ မြင့်မားသော စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ လေးစားမှုပြုစေချင်ပါတယ်၊ အနှစ်၂၀ လောက် တစိုက်စိုက်မှတ်မှတ် လုပ်ဆောင်နေကြသော ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကို စော်ကားမူပြုသော အလုပ်တွေကို ရပ်တန်းကရပ်ကြပါတော့လို့ ပြောပါရစေ။
ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမှာက န၀တအစိုးရကို တန်းလျှားကိုပြန်ပို့ ရမှာဖြစ်သလို၊ ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံး စုစည်းပြီး နိုင်ငံရေးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကို ခင်းကျင်းပေရမှာ။ တခြားဘာလမ်းမှမရှိသလို၊ တခြားဘာကိုမှလည်း ကြည့်စရာမရှိပါဘူး။ ခင်းကျင်းစရာမရှိပါဘူးဗျာ။
သေသေချာချာလေး ပြန်စဉ်းစားကြပါ။ ကျွန်တော်တို့က နိုင်လည်းရှုံး၊ ရှုံးလည်းရှုံးဆိုသော ကွင်းကြီးကိုဘာလို့ လုပ်ကြ ချင်နေရတာလည်း။ ဒီလိုခင်းကျင်းတာဟာ သမိုင်းမှာတော့ စာတွင်မယ်ဆိုတာကတော့ သတိထားစေချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ပြောပြောနေကြသော ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါအုံး။ ဥပဒေအောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ကရှိရမယ်ဆို၊ အခုက ဥပဒေအထက်ကိုတက်ပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုလုပ်ဖို့ အတွက်အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်ပြကြတာလား။ အခုလို မလေးမစားလုပ်ခံရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကိုလည်း စစ်အာဏာရှုးတွေ သောက်ရှက်မရှိ လုပ်ချင်တာလုပ်တိုင်း နောင်သမိုင်းမှာအခုလို ၄၆ နှစ်တာ သောက်တလွဲမျိုးတွေ အထုံဆက်လိုပါအောင် ၀ိုင်းပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ပေးကြမှာလား။ ပြောကြပါအုံးဗျာ။
ခင်ဗျားတို့ အားလုံကတော့ မရှက်ဘဲ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး LOBBY တွေလုပ် ၊ NO VOTE, NO CONSITUTION တွေလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြသလို၊ သောက်ရူး အာဏာရှင်တွေကလည်း ၄၆ နှစ်ဆိုသော ၄င်းတို့ ဖြတ်သန်း လာခဲ့သော လက်တစ်လုံးခြား လိမ်လည်ခြင်းနှင့် ဆက်လက် လိမ်လည်အုပ်ချုပ်ဖို့ကို၎င်း၊ မှားသွားရင် တစ်ကနေ ပြန်စမယ်ဆိုသော မူတွေနဲ့ အောင်နိုင်လို့ ကြားမှာ ပြည်သူတွေက မိအေး၂ ခါ မက ၃ ခါနာဖို့ အပြင် အဆစ်လေးပါလက်ဆောင် လုပ်ပေးလိုက်ရသော အကြောင်းတွေကို ရှက်ရှက်နှင့် မျက်စိမှိတ်ကာ၊ အများအတိုင်းဘဲ ဆိုသောစိတ်နဲ့ ၀ိုင်းလုပ် ပေးကြရမှာကိုလည်း ခင်ဗျားတို့ ကမျက်ကွယ်ပြု ကြရင်တော့ မကောင်းတော့ဘူးဗျာ။
ဘာလို သောမြေခံ၊ ရေခံ၊ သန္ဓေသား မကောင်းခံသော အကြောင်းတွေကို အခြေခံသောအကြောင်းတွေနဲ့ ရေးဆွဲ ထားသောအခြေခံဥပဒေကြီးကို လူထုဆန္ဒခံယူပွဲအဖြစ်လုပ်တာကို လက်ခံတာရယ်၊ ဝင်ရောက်ပြီးတော့ မထောက်ခံကြောင်းမဲ ပေးဖို့ အခင်းအကျင်းလုပ်ပြောနေကြရတာကိုက ကျွန်တော်တို့မှာ အဓိပ္ပါယ်မရှိသလို၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူအတွက်သော် လည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်အတွက်လည်းကောင်း၊ ဘာမှ အကျိုးမဖြစ်၊ အကျိုးမမြတ်၊ အနှစ်သာရ မရှိပါဘူး။
တကယ်တန်းက နဝတလုပ်နေခြင်းမှာ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲလို့သာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး စကားလုံးသုံးကာပြောနေပေမဲ့၊ ပါးစပ်က ဘုရားဘုရား၊ လက်က ကားယား ကားယား၊ အပြင် အောက်ကရမ်းဆိုသော နည်းနဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူကို စော်ကားပြီးရင်းစော်ကားသလို၊ ဘာသာကိုပါ စော်ကားမော်ကားလုပ်နေတာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် နဝတက သူ့နောက်မလိုက်သော ပြည်သူအားလုံး ထောင်ထဲကိုတစ်သက်လုံး ထည့်ထားဖို့ အခွင့်ရေးမသာ
အခြေခံဥပဒေ (Constitution) ကိုအသက်နဲ့ တမျှတန်ဖိုးထားကြပါဗျာ။ အုပ်ချုပ်ခံ လူထုလူတန်းစား အသီးသီးက လွတ်လွတ်လပ်လပ်၊ ပြောဆိုတင်ပြခြင်းတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ညီတူမျှတူတွေနဲ့ အများသဘောတူတဲ့ ကိုယ်စါးလှယ်တွေ အားလုံး ပါဝင်ရေးဆွဲတာကိုမှ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာကို ပိုင်စိုးသောအခြေခံမှု့ ကိုဖြစ်သာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပေါ်လာမယ် ဆိုတာကိုလည်း အပြည့်အဝ ခံယူပေးကြပါဗျာ။
သဘောမတူဘူး ....... သဘောမတူဘူး ....... သဘောမတူဘူး..... အားလုံးကန့် ကွက်ကြပါ။ နီးစပ်ရာကို ရဲရဲတင်းတင်း ပြည်သူတွေ ကန့်ကွက်ရဲဖို့နဲ့ အတူမတရားသောအမိန့် အာဏာတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားဆန့် ကျင်ကြဖို့ ကိုသာစည်းရုံးကြပါ။
ဒီတာဝန်နဲ့ ဒီအလုပ်တွေသာလျှင် ကျွန်တော်တို့ မလွဲမသေ၊ မဖြစ်မနေ မြန်မာပြည်ကို တကယ်ချစ်ရင် လုပ်ကြရမှာပါ။ သူခိုးအားပေး၊ အလိမ်အားပေး၊ သန္ဓေမကောင်းသော အခင်းအကျင်းတွေကို အမွေပေးဖို့တော့၊ လက်ဆင့်ကမ်းဖို့တော့ ၀ိုင်းပြီးမခင်းကျင်းကြပါနဲ့ဗျာ။
Posted by ကိုထိုက် at 23:28 11 comments
Posted by ကိုထိုက် at 08:08 8 comments
Posted by ကိုထိုက် at 17:22 8 comments
ကျနော့် ရင်ထဲကအယူအဆအတိုင်း ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါ။
(ကိုစံ ဆိုသူ တစ်ယောက်ရေးပို့လာသော စာအား ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါသည်။ ဘာကြောင့် နအဖ၏ ဆန္ဒခံယူပွဲကို မဖြစ်အောင် လုပ်သင့်သည်ကို ဆွေးနွေးထားသော ဆွေးနွေးချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသဘော ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လည်း တိုက်တွန်းထားပါသည်။ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ကြမည်ဆိုသော အသေးစိပ်အား ဆန္ဒရှိသူများ နီးစပ်ရာတွင် ကိုယ့်နည်းဖြင့် ကိုယ့်ဘာသာ လျှို့ဝှက် ဆောင်ရွက် ကြရန်တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီစစ်အစိုးရရဲ့ မည်သည့်လုပ်ရပ်ကိုမျှ အယုံအကြည်မရှိပါ၊ သူတို့၏လုပ်ရပ်တိုင်းသည် သူတို့အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်ကို ကျနော်တို့ တမျိုးသားလုံး၏ သွေးများဖြင့်ရင်းခဲ့ရသည့် သာဓကများကို ပြန်ကြည့်လျင်သိနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ယခုသူတို့ပြုလုပ်မည်ဟု ကြွေးကြော်ထားသော ပထမခြေလှမ်း ဆန္ဒခံယူပွဲအား မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်မရအောင် တမျိုးသားလုံး အင်တိုက်အားတိုက် ကန့်ကွက်ကြရပါမည်။ အကယ်၍ အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ရသွားပါက စစ်အစိုးရအနေဖြင့် နည်းပေါင်းစုံသုံး၍ သူတို့အလိုအတိုင်း မဖြစ် ဖြစ်အောင် လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မသမာမှုကို ကမ္ဘာတဝှမ်းသိမည်ကနောက်မှ၊ သူတို့၏ လမ်းပြမြေပုံကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နေသည်ဆိုသော ပြယုဂ်က အရင်ပေါ်ထွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့၏ ကန့်ကွက်မဲဆန္ဒများသည် သူတို့၏ အဖြေတွင် ထောက်ခံမဲများဖြစ်သွားမည်ဆိုသည်ကို စစ်အစိုးရ၏ ဂုဏ်သိက္ခာမရှိသော အရှက်မရှိသော လုပ်ရပ်ပေါင်းများစွာက ယုံမှားသံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိအောင် ညွှန်ပြနေပါသည်။
နိုင်ငံတကာနဲ့ တမျိုးသားလုံးက တောင်းဆိုနေသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုသည့် စကားသည် အဲဒီပွဲနှင့် အပြီးတိုင် ခြေမှုန်းခံလိုက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးစရာလမ်းလည်း ရှိမည်မဟုတ်တော့ပါ၊ ကုလလည်း ဘာမှပြောနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။ အာဆီယံကလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆက်လုပ်ပါလို့သာ ပြောနိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့လျင် ဒုတိယခြေလှမ်းဖြစ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ခပ်တည်တည်နှင့်ပင် ပြုလုပ်သွားတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
အဲဒီ ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည့် အခြေခံဥပဒေ ထောက်ခံခြင်းဆိုသည့် အဖြေတစ်ခုသည် စစ်အစိုးရအတွက် အရေးအကြီးဆုံးသော ခြေလှမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းခြေလှမ်းဖြင့် အရာရာကို နင်းခြေအနိုင်ယူပြီး၊ ရလဒ်ကို အသေဆုပ်ကိုင်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မသမာမှုပေါင်းစုံဖြင့် ပြီးပြည့်စုံနေသော စစ်အစိုးရ၏ အခြေခံဥပဒေသစ်သည် တမျိုးသားလုံးနလန်မထူ လူညွန့်တုံးမည်ဖြစ်သည်ကို အားလုံးသော ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းက မမှိတ်မသုန်ယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကမည်မျှပင် ကန့်ကွက်မဲတွေထည့်ထည့်၊ လက်မခံပါဘူး ဘယ်လောက်ပင်အော်အော်၊ အဲဒီဆန္ဒခံယူပွဲ
ကျင်းပခွင့်ရသွားလျှင်ပင် စစ်အစိုးရအတွက် လက်ခမောင်းခပ်ခွင့် ရသွားပြီဖြစ်ပါသည်။ ဟိုလူက အရည်အချင်းမမှီလို့ ဒီလူက တရားမဝင်လို့ဆိုသော အခြေခံဥပဒေသစ်တွင် ပါဝင်သော အချက်များကို ထောက်ပြကာ ထောက်ပြကာဖြင့် ကိုယ့်လူ သူ့ဘက်သားများဖြင့် အဖြေရှိပြီးသားရွေးကောက်ပွဲကြီးအား ကုလသမဂ္ဂ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့်ပင် မြိုင်မြိုင်ကြီးလုပ်ပြကောင်း လုပ်ပြပေလိမ့်ပါအုံးမည်။
ထို့ကြောင့် တမျိုးသားလုံးအနေနှင့် ကမ္ဘာ့အလည်မှာ ကျနော်/ကျမဟာဖြင့် မြန်မာပါလို့ ပြောရဲချင်သေးတယ် ဆိုရင်တော့ အဆိုပါ "အခြေခံဥပဒေသစ်" အတွက်ပြုလုပ်မည့်ပွဲအား မပျက်ပျက်အောင် ဖျက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ကျနော်၏ အဆိုပြုချက်အား လက်ခံသူများရှိပါက စုစည်းညီညွတ်စွာဖြင့် လျှို့ဝှက်အဖွဲ့များဖွဲ့၍ တောရောမြို့ပါမကျန် လူထုလူတန်းစားအသီးသီးသို့ ထိုအသိတရားများ စိမ့်ဝင်အောင်စည်းရုံးကြရပါမည်။)
- လယ်သမားလူတန်းစားလည်း ဘယ်တော့မှ လယ်မပိုင်သော လယ်သမားများဆက်ဖြစ်နေမည့်အကြောင်း။
- အလုပ်သမား လူတန်းစားသည်လည်း နံနက်စာနှင့် ညစာအလျှင်မမှီသောဘဝများ၊ အပေါင်ဆိုင်နှင့် မိတ်ဆက်
- အခြေခံဝန်ထမ်းများကြားတွင်လည်း သမာအာဇီဝကျကျနှင့် ခိုင်မာသော ဘ၀အာမခံချက်များပေးနိုင်မည့်
-ပညာတတ် လူတန်းစားများကြားတွင်လည်း မျိုးဆက်သစ်များ နလန်မထူနိုင်တော့သည့် ဘဝဆိုးကြီးသို့ ဆိုက်ဆိုက် မြိုက်မြိုက်ရောက်သွားပြီး (၅)ပါးသီလမလုံသော အလုပ်အကိုင်များဖြင့် ရှင်သန် အသက်မွေးရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း။
- ကုန်သည်ပွဲစားများကြားတွင်လည်း မခိုင်မာသောစီးပွားရေးစနစ်ဆိုးကြောင့် မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်မျှ
ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်မလုပ်စားနိုင်တော့မည့်အပြင် စိတ်ချလက်ချအိပ်မရနိုင်သော သောက၀န်ထမ်းများ
- အရာခံ၊ အကြပ်၊ စစ်သည် (အခြားအဆင့်)များကြားတွင်လည်း လူဝတ်လဲမည့် စစ်အစိုးရသည် လူဝတ်ဖြင့် လှည့်ခိုး၊ လှည့်ဆိုးအုံးမည်ဖြစ်သဖြင့် စစ်တပ်ရိက္ခာအား ယခုရှိရင်းစွဲ လောက်ပင်မထောက်ပံ့နိုင်တော့မည့် အကြောင်း၊ ထို့ပြင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးသည်လည်း တောပြန်ဝင်၍ တော်လှန်ကြအုံးမည်ဖြစ်သဖြင့်၊ တိုက်ပွဲကြီးငယ်များ အများအပြားပေါ်ပေါက်ပြီး အသက်ခန္ဓာတည်မြဲမှုမှာ အာမ မခံနိုင်တော့ကြောင်း။
- နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် ဒီနိုင်ငံမကောင်းရင် ဒီပြင့်နိုင်ငံပြောင်းနေမည်ဟု စိတ်ကူးထားသူများအား အာမခံချက်မရှိသော နိုင်ငံမှလာသူ (တနည်းအားဖြင့်) “မြန်မာ” ဟုဆိုလိုက်လျှင် နှာခေါင်းရှုံ၍ အဆင့်အတန်းခွဲခြားမည် ကိုခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထဲထဲဝင်ဝင်ရှင်းပြပြီး၊ ယခုကျင်းပမည့်ပွဲများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့်တိုက်ဖျက်သွားရန် လှုံဆော်စည်းရုံးကြရပါမည်။
ကျနော်၏ ဆွေးနွေးချက်များသည် အမှန်ဆုံးဟုမဆိုလိုပါ၊ အားလုံး၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဆွေးနွေးချက်များကိုလည်း ကျနော် သိလို၊ ကြားလို၊ လက်ခံလိုပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 16:54 11 comments
အေးလွင်နှင့် အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှု
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (၂၀.၀၂.၂၀၀၈) တွင် မှော်ဘီမြို့က အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ်(G.T.C) တွင် နအဖမှ ရေးဆွဲသော အခြေခံဥပဒေကို ထောက်ခံကြောင်း စာများ လိုက်ဝေနေသည်ဟုသိရပါသည်။
(၈၈) မျိုးဖျက် ကျောင်းသား အေးလွင်
ပထမ တစ်ကြိမ် အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိသျှ သံရုံးရှေ့တို့ တွင် နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် အေးလွင်နှင့် လူတစ်စု လက်စွမ်းပြ ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင် ဆန္ဒပြမှုများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ယခုတကြိမ် တွင်လည်း (၈၈) လှုပ်ရှားမှုနှင့် (၈၈) ကျောင်းသားများကို နာမည်ဖျက်နေသော သိက္ခာမဲ့ ၈၈ ကျောင်းသား အေးလွင်နှင့် လူတစ်စု ထပ်မံ၍ စာဝေပွဲများ ကျင်းပနေကြပြန်သည်။
နာမည်ကျော် အေးလွင်တစ်ယောက် မိမိဝင်ရှုပ်ခဲ့လို့ ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့ မတရား အဖမ်းခံရပြီး၊ ယခုအထိ ထောင်နှစ်ရှည် ကျခံနေရသည်ကို နောင်တရသေးပုံ မပေါ်ဘဲ မြန်မာ တမျိုးသားလုံး နအဖ၏ အာဏာရှင်လက်အောက် ရာသတ်ပန် ထောင်ကျအောင် လုပ်ဆောင်နေခြင်းသား ဖြစ်သည်။
Posted by ကိုထိုက် at 16:14 10 comments
မေး၊ ဖြေ ကဏ္ဍ (သို့) မြန်မာပြည်သူတိုင်းရဲ့ တာဝန်
ကျွန်တော့် ဘလော့မှာ အမေး၊ အဖြေ ကဏ္ဍလေးတစ်ခု ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွက် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိသော၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖြေနိုင်တာကို ဖြေပါ့မယ်။ မဖြေနိုင်တာကို မဖြေနိုင်ဘူး၊ မသိတာကို မသိဘူးလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပါ့မယ်။ လိုအပ်လျှင် နီးစပ်ရာ တတ်ကြွမ်းသူတွေကို မေးပေးပါ့မယ်။ အခြား ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း စိတ်ဝင်စားရင် မေးထားတဲ့ မေးကြတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဝင်ဖြေလို့ ရပါတယ်။ အကျိုးဖြစ်မယ့် ထိုက်တန်တဲ့ အမေးနဲ့ အဖြေတွေကို စုဆောင်းပြီး Post တင်ပါမယ်။ comment မှာလည်းကောင်း၊ မေးပို့၍ လည်းကောင်း မေးနိုင်ပါတယ်။ cbox မှာတော့ မမေးပါနဲ့၊ ကျွန်တော် အမြဲ မကြည့်အားလို့ပါ။ အရမ်းများသွားရင် ပြန်ရှာရတာလည်း ခက်လို့ပါ။
လူတိုင်း မေးလေ့၊ ကြားလေ့ ရှိရတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ စကြည့်ပါမယ်။
မေး ......“အင်း ... ငါတို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်း ဘယ်တော့ ပြန်ကောင်းမယ်မှန်း မသိပါလား”
ဖြေ ..... “ခင်ဗျား ပြန်ကောင်းအောင် လုပ်တဲ့အထဲ ပါဝင်လာတဲ့ နေ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ကောင်းမယ့်နေ့ပဲ။”
မေး ... “မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် UN, EU, USA, UK စတဲ့ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံတွေက ကူညီပေးနိုင်မှာလား”
ဖြေ ... “ကူညီပေးနိုင်တယ် ဆိုတာထက် ... ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အဆင့်သာရှိပါတယ်။ တကယ်လုပ်ရမှာက မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ ခင်ဗျားမှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးကို UN, EU, USA, UK ဆိုတာတွေက အရယူပေးနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ခင်ဗျားသာလျှင် မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးကို ရယူပေးနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။”
မေး ..... “အခု ဆန္ဒခံယူပွဲအတွက် ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။”
ဖြေ .... “ဦးအောင်တိုး အခု လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ဝေမယ်လို့ ပြောတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံမှု စာအုပ်ကို အာဏာပိုင်များထံမှ အမြန်ဆုံး ရအောင် ယူပါ။(အချိန် သိပ်မရှိပါ။) မရှိလျှင် ပြည်သူ့ တာဝန်၊ ပြည်သူ့ ရပိုင်ခွင့် အနေဖြင့် အာဏာပိုင်များထံမှ တရားဝင်စာရေးပြီး တောင်းကြပါ။ ပြီးလျှင် .... ဖတ်ကြည့်ပါ။ ပြည်သူအချင်းချင်း ဆွေးနွေးကြပါ။ ဥပဒေ တတ်ကြွမ်းသူများ ပါဝင်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။ ကန့်ကွက်သင့်၊ မသင့်။ ထောက်ခံ သင့်၊ မသင့်ကို ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ကြပါ။”
စဉ်းစားမိသော အမေး၊ အဖြေများက်ိုလည်းဆက်လက် ရေးသွားပါ့မယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 12:06 10 comments
မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံး ကြေငြာချက်
Posted by ကိုထိုက် at 19:21 8 comments
လန်ဒန်မြို့ ပဒိုမန်းရှာ ရက်လည် ဆွမ်းကျွေးပွဲ အောင့်မေ့ဘွယ် အခန်းအနား (သို့) တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး
Posted by ကိုထိုက် at 18:20 8 comments
Mon National Day In London
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ၁၆.၀၂.၀၇ က လန်ဒန်မြို့မှာ မွန်တိုင်းရင်းသားများရဲ့ ၆၁ နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ အခန်းအနားကို အောင်မြင် ပျော်ရွှင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးဆိုတာ ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စလို့ မြင်လာအောင်၊ တိုင်းရင်းသားတွေကို သွေးခွဲထားသော နအဖလက်အောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ဒီလို ချစ်ချစ်ခင်ခင် အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ တိုင်းရင်းသား ရိုးရာ အမျိုးသားနေ့ပွဲကို အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်တာဟာဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ညီညွတ်ရေးဆိုတာ တကယ်လိုချင်လျှင် တည်ဆောက်လို့ ရနိုင်တဲ့ အရာဆိုတာ သက်သေပြနေတာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးတာက စတင်ခဲ့ပြီး၊ အဖွင့် စကား၊ မွန်ရိုးရာ အကများ၊ သီချင်းများဖြင့် အဝေးရောက် မြန်မာပြည်သားများရဲ့ တိုင်းရင်းသား ညနေခင်းတစ်ခုကို မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ပန်းချီ အနုပညာရှင် ကိုထိန်လင်းက ရေးသားပြီး လန်ဒန်ရောက် မွန်တိုင်းရင်းသားများ ကပြသွားတဲ့ အငြိမ့်ပွဲဟာဖြင့် အပျော်တမ်း ကပြသွားတယ်လို့ မထင်ရအောင်ကို ကောင်းမွန်သေသပ်ပြီး သရိသတ်များ ပွဲကျခဲ့တာဟာလည်း အဝေးရောက် မြန်မာတွေအတွက် အပန်းပြေစရာ ညနေခင်းလေးပါပဲ။
ပွဲစီစဉ်သူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဒီနေရာက ကျေးဇူးတင်စကား ပြောလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted by ကိုထိုက် at 03:37 11 comments
Nine Nobel Laureates Call for UN Security Council to Act in Burma
Posted by ကိုထိုက် at 21:44 8 comments
နအဖ၏ အမျိုးသားညီလာခံမှ ထွက်လာသော အခြေခံ ဥပဒေကို ကန့်ကွက်ရသော အကြောင်းအရင်း .. အပိုင်း(၅)
(တစ်ခါ အလိမ်ခံရလျှင် လိမ်သူ၏ အပြစ် ဖြစ်ပြီး၊ နှစ်ခါ အလိမ်ခံရလျှင် အလိမ်ခံရသူ၏ အပြစ်သာ ဖြစ်သည်။
၁၉၉၀ ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲမှ ရလဒ်ကို မသိချင်ယောင် ဆောင်ကာ အာဏာကို ဖြတ်လမ်းက ရယူထားသော နအဖ၏ နောက်တကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဆန္ဒခံယူပွဲ ပြုလုပ်ကာ အနိုင်ရသော ပါတီအား အာဏာလွှဲပေးမည်ဆိုသော နအဖ၏ ကတိစကားကို ယုံကြည်သူများမှာ ရူးသွပ်သော စိတ်ရောဂါ ခံစားနေရသူများသာ ဖြစ်သည်။)
( ဋ္ဋ ) နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့်အရေး၊ တာဝန်များနှင်းစပ်လျဉ်းပြီး
-၄၄- ( ၁ ) တိုင်းရင်းသား မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူအားလုံးသည် နိုင်ငံသားဖြစ်သည်။ နိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အတည်ပြု ပြဌာန်းသည့်နေ့တွင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီးသူများသည် နိုင်ငံသားများ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားပြုခြင်းနှင့် နိုင်ငံသား အဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်းတို့သည် ဥပဒေဖြင့် ပြဌာန်းသည့်အတိုင်း ဖြစ်မည်။
-၄၅- ( ၂ ) နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် တန်းတူညီမျှမူ အခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်မူ အခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမူ အခွင့်အရေး စသည်တို့ ခံစားခွင့်ရှိမည်။
-၄၆- ( ၃ ) တရားရုံးခွင့်ပြုချက် မရရှိက နိုင်ငံသားတစ်ဦးကို -၂၄-နာရီထက်ကျော်လွန်၍ ချုပ်နှောင်ထားခွင့် မရှိစေရ။
-၄၇- ( ၄ ) နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မူ မပြိုကွဲရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံခိုင်မြဲရေးတို့ကို စောင့်ထိမ်းရန် တာဝန်ရှိသည်။
-၄၈- ( ၅ ) နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းရန်တာဝန်ရှိသည်။
-၄၉- ( ၆ ) နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဥပဒေပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ စစ်ပညာသင်ကြားရန် တာဝန်ရှိမည်။
-၅၀- ( ၇ ) နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဥပဒေပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ စစ်မူထမ်းရန် တာဝန်ရှိမည်။
-၅၁- ( ၈ ) ပြည်သူတို့ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးတို့သည် နိုင်ငံသားတိုင်း၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။
-၅၂- ( ၉ ) နိုင်ငံသားများ၏ လွတ်လပ်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ခံစားခွင့်၊ တာဝန်နှင့် တားမြစ်ချက်များကို ထိရောက်ခိုင်မာ ပြည့်စုံစေရန် လိုအပ်သော ဥပဒေ ပြဌာန်းမည်ဟု အခြေခံ မူများချမှတ်ပါသည်။
( ဌ ) တိုင်းရင်းသားများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး
-၅၃- ( ၁ ) နိုင်ငံတော်သည် တိုင်းရင်းသားများ၏ စကား၊ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမူတို့ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်စေရန် ကူညီဆောင်ရွက်မည်။
-၅၄- ( ၂ ) နိုင်ငံတော်သည် တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး၊ ချစ်ကြည်လေးစားရေးနှင့် ရိုင်းပင်းကူညီရေးတို့ တိုးတတ်ဖြစ်ထွန်းစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်မည်။
-၅၅- ( ၃ ) နိုင်ငံတော်သည် တိုးတတ်ဖွံ့ဖြိုးမူ နည်းပါနေသည့် တိုင်းရင်းသားများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စသည်တို့ ပါဝင်သော လူမူစီးပွားရေး တိုးတတ်ဖွံ့ဖြိုးမူအတွက် ကုညီဆောင်ရွက်မည်ဟု အခြေံမူများ ချမှတ်ပါသည်။
အခြေခံမူ (၅၃) (၅၄) (၅၅) အရ စာပေ၊ စကား အနုပညာ ယဉ်ကျေးမူတို့သည် တိုင်းရင်းသားများ၏ အသက်ဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားများ၏ မူလတာဝန်ဖြစ်သည်။ ဗဟို အစိုးရ အနေဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်မည်ဟု အပြောသက်သက် မဖြစ်စေဘဲ လက်တွေ့ဦးစီးဆောင်ရွက်ရပေမည်။
လက်ရှိနိုင်ငံတော် အာဏာပိုင်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် ဗမာလူမျိုးတို့၏ စကား၊ စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမူတို့ကို ရှေ့ တန်းတင်ထားသော်လည်း တိုင်းရင်းသားတို့၏ စာပေ ယဉ်ကျေးမူတို့ကို မှေးမှိန်အောင် ပြုလုပ်နေကြပါသည်။ ဥပမာ - နယ်စပ်ဒေသများအထိ ဗမာစာကိုသင်ကြားနိုင်ရန် မူလတန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ရန်ကြိုးစားပြီး ဒေသခံတိုင်းရင်းသားဘာသာ၊ စာပေ ထွန်းကားရေးကို ဖိနှိပ်ဟန့်တားနေသည်မှာ အထူးပြောဖွယ်မရှိပါ။
ယဉ်ကျေးမူဆိုရာ၌လည်း လက်ရှိကျင်းပနေသော ဆို၊ က၊ ရေး၊ တီး ပြိုင်ပွဲများသည် ဗမာ့သုခုမ၊ အနုပညာထွန်းကားရေးကို လုပ်ဆောင်နေသည့် အပြင် တိုင်းရင်းသား ယဉ်ကျေးမူတို့ကို ၀ါးမြိုလျက်ရှိသောကြောင့် တိုင်းရင်းသား၊ စကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမူ ထွန်းကားရေးတို့ကို အခြေခံဥပဒေတွင် လေးနက်စွာ ဖေါ်ပြထားရပေမည်။
( ဍ္ဍ ) တောင်သူလယ်သမား များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး
-၅၆- ( ၁ ) နိုင်ငံတော်သည် တောင်သူလယ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သည့် ဥပဒေများ ပြဌာန်းဆောင်ရွက်ရမည်။
-၅၇- ( ၂ ) တောင်သူ လယ်သမားများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် ကောက်ပဲ သီးနှံများ သင့်တင့် မျှတသည့် တန်ဖိုးရရှိရန် ကူညီဆောင်ရွက်မည်ဟု အခြေခံ မူများ ချမှတ်ပါတယ်။
အခြေခံမူ (၅၆) နှင့် (၅၇) အရ စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ ကျေးဇူးရှင်တောင်သူဦးကြီးများကို ကူညီဆောင်ရွက်မည်ဆိုသည့် အသုံးအနှုံးအစား ဦးစီးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ဖေါ်ပြရပေမည်။ တောင်သူလယ်သမား သမဂ္ဂများ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းပေး၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
( ဎ ) အလုပ်သမားများနှင့် စပ်လျှင်းပြီး
-၅၈- နိုင်ငံတော်သည် အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည့် ဥပဒေများ ပြဌာန်းဆောင်ရွက်မည်ဟု အခြေခံမူများ ချမှတ်ပါတယ်။
အခြေခံမူ (၅၈) အရ အဓိက လူတန်းစားဖြစ်သော အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည့်အပြင် အခြေခံ အလုပ်သမား သမ္မဂများကို ဖွဲ့စည်းခွင့်ပေး၍ အလုပ်သမားရေးရာ ကိစ္စများကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရမည်။
( ဏ ) အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး
-၅၉- နိုင်ငံတော်သည် အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ၏ အကျိုးကို ကူညီဆောင်ရွက်မည်ဟု အခြေခံမူ ချမှတ်ပါတယ်။
အခြေခံမူ (၅၉) အရ နိုင်ငံတော်သည် ခေတ်မီနိုင်ငံတော်ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းနေသောကြောင့် တတ်သိပညာရှင်များ၏ အကျိုးကို အားပေးချီးမြှောက်ရမည့်အပြင် ဘ၀လုံခြုံရေးကိုလည်း ကာကွယ်ပေးရမည်။
( တ ) နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး
-၆၀- ( ၁ ) နိုင်ငံ့ ၀န်တမ်းများသည် ပါတီနိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းရမည်။
အခြေခံမူ (၆၀) အရ အမျိုးသာနိုင်ငံရေးဟု အပေါ်ယံအားဖြင့် မြင်ရသော အချို့ ကိစ္စများသည် ပါတီနိုင်ငံရေးဘက်သို့ ယိမ်းယိုင်သွားလေ့ရှိသဖြင့် ဤကဲ့သို့သော အခြေခံမူမျိုးကို ရှောင်ရှားရမည်။ သို့မှသာ ဒီမိုကရေစီနီုင်ငံတော်၏ ၀န်ထမ်းကောင်းများ အဖြစ် ပီပြင်လာစေမည်။
-၆၁- ( ၂ ) နိုင်ငံတော်သည် နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းခွင် အာမခံချက်ရရှိရေး၊ စားဝတ်နေမူ ဖူလုံရေး၊ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီး ၀န်ထမ်းများ မီးဖွားခြင်းဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရေးနှင့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ စားဝတ်နေမူ သက်သာ ချောင်ချိရေးတို့အတွက် လိုအပ်သည့် ဥပဒေများ ပြဌာန်းမည်ဟု အခြေခံမူများ ချမှတ်ပါတယ်။
(ထ) အမျိုးသားရင်ကျေးမှုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး - -
-၆၂- နိုင်ငံတော်သည် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခိုင်မာရေးနှင့် စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်မည်ဟု အခြေခံမူချမှတ်ပါတယ်။
အခြေခံမူ (၆၂) အရ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုဆိုသည်မှာ ဗမာသာမက တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ ယဉ်ကျေးမှုများကိုလည်း ကာကွယ်ပြဌာန်းပေးရမည်။
( ဒ ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး - -
-၆၃- ( ၁ ) နိုင်ငံတော်သည် ပြည်သူများ၏ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး တိုးတက်စေရေးတို့အတွက် အလေးထားဆောင်ရွက်မည်။
-၆၄- ( ၂ ) နိုင်ငံတော်သည် ပြည်သူများ၏ ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးတို့တွင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများက ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် လိုအပ်မည့်ဥပဒေ ပြဌာန်းဆောင်ရွက်မည်။
-၆၅- ( ၃ ) နိုင်ငံတော်သည် အခမဲ့မသင်မနေရ မူလတန်း ပညာရေးစနစ်ဖော်ဆောင်မည်။
အခြေခံမူ (၆၅) အရ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားများ၏ စာပေကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက် သင်ကြားစေရန် ပြဌာန်းပေးရမည်။
-၆၆- ( ၄ ) နိုင်ငံတော်သည် ဘက်စုံအတွေးအခေါ် အယူအဆမှန်ကန်၍ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ပြီး နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက် အကျိုးပြုမည့် ခေတ်မီပညာရေးစနစ်ကို ဖော်ဆောင်မည်ဟု အခြေခံမူများ ချမှတ်ပါတယ်။
( ဓ ) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး - -
-၆၇- နိုင်ငံတော်သည် လက်မှုလယ်ယာမှ စက်မှုလယ်ယာသို့ ကူးပြောင်းနိုင်ရန် နည်းပညာ၊ အရင်းအနှီး၊ စက်ပစ္စည်း၊ ကုန်ကြမ်း အစရှိသည်တို့ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းမည်ဟု အခြေခံမူချမှတ်ပါတယ်။
( န ) စက်မှုလက်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး - -
-၆၈- နိုင်ငံတော်သည် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် နည်းပညာ၊ အရင်းအနှီး၊ စက်ပစ္စည်း၊ ကန်ကြမ်း အစရှိသည်တို့ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းမည်ဟု အခြေခံမူချမှတ်ပါတယ်။
( ပ ) အလုပ်အကိုင်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး - -
-၆၉- နိုင်ငံတော်သည် ပြည်သူများ အလုပ်လက်မဲ့ နည်းပါးစေရန် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီဆောင်ရွက်မည်ဟု အခြေခံမူချမှတ်ပါတယ်။
( ဖ ) မိခင်၊ ကလေး၊ အိုမင်းမစွမ်းသူများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး - -
-၇၀- ( ၁ ) နိုင်ငံတော်သည် မိခင်နှင့် ကလေးသူငယ်များ၊ မိဘမဲ့ကလေးများ၊ ကျဆုံးသော တပ်မတော်သားများ၏ ကလေးများ၊ အိုမင်းမစွမ်းသာများအားကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မည်။
-၇၁- ( ၂ ) နိုင်ငံတော်သည် မသန်မစွမ်းဖြစ်လာသော တပ်မတော်သားများအား သင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာ နေထိုင်စားသောက်နိုင်စေရန်နှင့် အသက်မွေးပညာကိုအခမဲ့သင်ယူနိုင်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်မည်ဟု အခြေခံမူချမှတ်ပါတယ်။
အခြေခံမူ (၇၁) အရ တပ်မတော်သားများသည် လစာငွေ၊ ယူနီဖောင်း၊ ရိက္ခာ အပြည့် အ၀ရရှိသောကြောင့် အခြားဝန်ထမ်းများထက် အခွင့်အရေးပိုမို ရရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ အခွင့်အရေးပိုမိုပေးခြင်းအားဖြင့် ၀န်ထမ်း အကြား စိတ်ဝမ်းကွဲပြားစေမည့် အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေပါသည်။ တပ်မတော်သား ဆိုသည်မှာ အခြား နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းများကဲ့သို့ နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းများသာ ဖြစ်ကြောင်း သတိချပ်သင့်ပေသည်။
စစ်သားဖြစ်သောကြောင့် အခွင့်အရေးပိုယူခြင်းသည် သဘာဝ မကျပေ။ ယောက်ကျားကောင်းပီသသော စစ်သားသည် အခြားသော တိုင်းပြည်ဝန်ထမ်းများကဲ့သို့ သာတူညီမျှသော အခွင့်အရေးကိုသာ ရယူမည်ဆိုသော မြင့်မြတ်သည့် စိတ်ထားရှိသင့်သည်။
( ဗ ) လူငယ်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး - -
-၇၂- နိုင်ငံတော်သည် လူငယ်များအား မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး၊ အတွေးအခေါ် မှန်ကန်ရေးနှင့် ဗလငါးတန် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်မည်ဟု အခြေခံမူ ချမှတ်ပါတယ်။
( ဘ ) ဘာသာ၊ သာသနာရေးနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး- - -
-၇၃- ( ၁ ) ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးနှင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြဌာန်းချက်တို့နှင် သော်လည်းကောင်း မဆန့်ကျင်လျှင် နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဘာသာ၊ သာသနာရေးတွင်လွတ်လပ်စွာ ယူဆနိုင်သောအခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ် ဆောက်တည်နိုင်သော အခွင့်အရေးတို့ကို အညီအမျှ ရရှိရမည်။
-၇၄- ( ၂ ) ဘာသာ၊ သာသနာရေးဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်တည်ဆောက်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေစေကာမူ ထိုသို့ဆက်စပ်နေသော စီးပွားရေး၊ ဘဏ္ဌာရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် အခြားလောကီရေးဆောင်ရွက်မှုတို့ကို အထက်ပါအခွင့်အရေးတွေ မပါဝင်စေရ။
-၇၅- ( ၃ ) ထိုသို့လွတ်လပ်သောအခွင့်အရေးများကို ပေးထားသော်လည်း ပြည်သူ့ အကျိုးကိစ္စ၊ ပြုပြင်ရေးကိစ္စ တို့အတွက် နိုင်ငံတော်၏ဥပဒေပြုခြင်းကို မတားမြစ်ရ။
-၇၆- ( ၄ ) ဗုဒ္ခဘာသာ သာသနာတော်သည် နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသား အများဆုံး ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သော ဂုဏ်ထူးဝိသေသ နှင့် ပြည့်စုံသည့် ဘာသာ၊ သာသနာ ဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်ပြုသည်။
-၇၇- ( ၅ ) နိုင်ငံတော်သည် အစ္စလမ် ဘာသာသာသနာ၊ ခရစ်ယာန် ဘာသာသာသနာ၊ ဟိန္ဒူ ဘာသာသာသနာနှင့် နတ်ကိုးကွယ်သောဘာသာတို့ကို နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အာဏာတည်သောနေ့၌ နိုင်ငံတော်တွင်ရှိနေကြသောကိုးကွယ်ရာ ဘာသာသာသနာများဟူ၍ အသိအမှတ်ပြုသည်။
-၇၈- ( ၆ ) နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘာသာသာသနာများကို နိုင်ငံတော်က တတ်နိုင်သမျှ ကူညီစောင့်ရှောက်မည်။
-၇၉- ( ၇ ) နိုင်ငံရေးကိစ္စအလို့ငှာ ဘာသာသာသနာကို အလွဲသုံးစားမပြုရ။ ထို့အပြင် လူမျိုးရေးကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်၊ တစ်ဂိုဏ်းနှင့်တစ်ဂိုဏ်း မုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း၊ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းတို့ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သော သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာရန် အကြောင်းရှိသော အပြုအမူသည် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ ထိုအပြုအမူများအတွက် အပြစ်ဒဏ် ပေးနိုင်ရန် ဥပဒေပြဌာန်းနိုင်သည်ဟု အခြေခံမူများချမှတ်ပါတယ်။
ဘာသာ၊ သာသနာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခရစ်ယာန် အများစုဖြစ်သော ကချင်တောင်တန်း၊ ချင်းတောင်တန်း၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ဒေသ တို့တွင် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပေးရမည်။ ဗုဒ္ခဘာသာကို အသုံးချပြီး အခြားသော ဘာသာများအပေါ် မဖိနှိပ်ရ၊ လက်တွေ့အနေဖြင့် ခရစ်ယာန် အများစုဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ဘာသာရေးနှိပ်ကွပ်မှုများကို သင်ခန်းစာယူ၍ ကာကွယ်တားဆီးရမည်။
Posted by ကိုထိုက် at 14:19 12 comments
Cuban Castro is much wiser than Burmese Military
Ailing Castro gives up the Cuban presidency
HAVANA (AFP) — Ailing revolutionary icon Fidel Castro permanently gave up the Cuban presidency on Tuesday, ending five decades of ironclad rule of the island marked by his one-man defiance of the United States.
Eighteen months after he was stricken with illness, the 81-year-old Castro said inamessage published by the official media that he would not accept the presidency again.
"I neither will aspire to nor will I accept -- I repeat -- I neither will aspire to nor will I accept, the position of president of the council of state and commander in chief," Castro wrote almost 19 months afterasevere illness caused him to hand power temporarily to his brother Raul.
Raul Castro saidamonth ago that the National Assembly would elect Cuba's next president on February 24, amid speculation that his brother -- for the first time in five decades -- might not be its choice.
Cuba's National Assembly speaker Ricardo Alarcon had said that while his recovery is ongoing, it was up to Fidel Castro to decide whether he will stay on as president, if reelected in February.
Some speculate Raul Castro might become president onapermanent basis or that another top regime official might move up the ladder, technically ending Fidel Castro's official dominance of the regime. Few, however, doubt Fidel would remain influential in the latter case.
While Fidel Castro appears to be in better health thanayear ago, many Cuba-watchers believe he would not be able to resume the full, wide-ranging powers he used to wield.
Some analysts believed he might continue to remain head of state on paper, essentially acting asakind of behind-the-scenes guardian of the 1959 revolution while leaving other top communist officials to deal with the day-to-day work.
Guerrilla revolutionary and communist idol, Fidel Castro held out against history and turned tiny Cuba intoathorn in the paw of the mighty capitalist United States.
The Cuban president, who overthrew Fulgencio Batista and took power in 1959, had said he would never retire from politics, and though illness forced him into seclusion in the final months of his presidency.
Famed for his rumpled olive fatigues, straggly beard and the cigars he reluctantly gave up for his health, Castro keptatight clamp on dissent at home while defining himself abroad with his defiance of Washington.
A great survivor andafirebrand, if windy orator, Castro dodged all his enemies could throw at him in nearly halfacentury in power, including assassination plots,aUS-backed invasion bid, andapunishing US trade embargo.
Posted by ကိုထိုက် at 10:02 11 comments
An Appeal By The Public Movement Organizing Committee
Reference : 2/2008 SCMM
Under the military rulers we, the general public are getting poorer everyday and the poverty net that surrounds us is just bigger and wider. By contrast,ahandful of the military generals, and their families and friends, are getting extremely wealthy, that they can hardly find enough banks to keep all the money they have extorted from the people of Burma.
While repeatedly shouting out loud that they are encouragingamarket economy system, the military group are in practice using the Burmese economy as their own market and selling of the counties’ resources for their own benefit. Asaresult the public, from individual road sellers to small and medium business owners and all other employed workers have to struggle to survive while it is impossible to live and work inastraightforward way as they are forced to pay huge taxes, forced donations and contributions, fines and penalty payments.
Our country’s important businesses and all natural resources are under the control of the military group, where they can sign contracts, permit or license at will, allowing them to steal the nations wealth that is they almost choke on it. Meanwhile we, the public, have to work from dawn till dusk, simply to survive.
Our country’s health, education and social services are also some of the worst in the world. Virtually none of the money stolen from the public, and none of the vast income from the sale of our country’s natural resources are spent on public services. The money goes either to the small ruling junta, family and followers, or to buy more lethal weapons which they can use to intimidate, repress and kill its own monks and citizens. Any public services built with the minimal funds used are for cosmetic effect only, for duping the international media, but what benefit do we actually get? Aren’t we all paying ourselves for health, education, social and all other services? We are like captive zoo animals, used by the junta to gain international aid, through our poverty and suffering, from which the corrupt authorities cut all the flesh for their own consumption, and laugh in the face of the public as they throw them the bones.
Whenever the country’s suffering and poverty is referred to the junta always blame it on the international economic sanctions. The international community has repeatedly offered immediate help and support if they start to make changes in the political and economical situation of the country which the junta repeatedly refuses at the cost of continued public starvation.
Their one real policy is to maintain their control over everything in the country. In suchasituation, every investment, all support and aid, pumps money into the junta’s own bank accounts, while the public remains poor.
Intimidation and bullying of vulnerable civilians has becomeacasual regular practice all the way down from the central to the lower level authorities, where we are being controlled by fear– ludicrously unreasonable laws, arbitrary orders and the grossly punitive prison sentences.
If we continue to put up with the abuse, bullying and repression, our off-springs will also become the slaves to the junta’s obnoxious offspring. We must work to improve our own children’s future. Our reply to the junta must be directed at replacing their violent and grossly evil selfishness with fairness and peace. We must defend ourselves from the lethal power of the juntas’ endless weaponry through the power of the people.
We must now boycott the junta’s own businesses.
• We are systematically helping to reclaim our own rights and economy which has been stolen from us.
• We are protecting and defending our own rights and benefits,
• We are peacefully and lawfully answering the bullies instead of just tamely complying and suffering,
• We are staging the silent mass protest and demonstration, which reflects public solidarity,
• We are helping to stop the arrest, torture and killing of the monks, nuns, students, civilians and ethnic groups.
……..We must all participate …….
• This is an obligation for all of us Burmese who are denied all human rights,
• This is to secure the continued existence of our society into the future,
• This is our National movement.
To start to resolve all the issues and problems which beset our country, including poverty, the SPDC military junta must engage in meetings with public leaders including the ethnic groups and Daw Aung San Suu Kyi. This is the only way that the country will be able to find peace and in time, to develop.
We will be maintaining these economic sanctions and boycotts until genuine discussions begin to findaclear resolution to our daily struggle with the problems of basic subsistence, maintaining health and gaining an education.
In solidarity and union, we will march forward together until we achieve these absolutely essential goals.
1 All Burma Monks Alliance (ABMA)
2 United Groups of Ethnic Youths
3 All Burma Federation of Students Union
4 8888 Generation Students
5 Peace loving Muslim Organization
6 Generation Wave (New Blood Youth Organization)
7 Lawyers Union
8 Poets Union
9 New Generation Journalists Union
10 Public Activities Development Committee (Mandalay)
11 Public Activities Development Committee (Rangoon)
12 Writers and Artists Group
(Translation by Nay Chi U)
Posted by ကိုထိုက် at 08:32 8 comments
Posted by ကိုထိုက် at 07:46 8 comments
နအဖအား သပိတ်မှောက်ရန် နှိုးဆော်ချက်
Posted by ကိုထိုက် at 07:02 11 comments
Let's Reject the Burmese Military Junta's Sham Constitution
ဘာကြောင့် နအဖရဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲကို ကန့်ကွက်ရဖို့ လိုပါသလဲ။ ... ဒီမှာ .... ဖတ်ရှု၊ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 03:159comments
Posted by ကိုထိုက် at 10:25 8 comments